इरानले ट्रम्पलाई पागलको संज्ञा दिंदै अमेरिकी सेनामाथि नै गर्यो अहिलेसम्मकै ठुलो घोषणा, विश्व नै त्रसित — Sanchar Kendra
१कक्षा ११ को विद्यार्थी मूल्यांकन विद्यालयले आफ्नो अनुकूलतामा गर्न सक्ने
२काठमाडौँ उपत्यकामा निजी गाडी चलाउन दिने तयारी, सिडिओको बैठक बस्दै
३कोरोनाले थला परेको भारतबाट आयो अहिलेसम्मकै खुसीको खबर
४महाकाली नदीमा बाढी- निर्माणाधीन पुलको बाँध बगायो
५बेहुली लिन गएका बेहुलालाई कोरोना देखिएपछि…
६फेरि घट्यो सुनको मूल्य
७प्रेमिकासँग ​पुनर्मिलनपछि दंग ज्याकले किन गर्न सकेनन् गोल ?
८आँपका लागि राखियो तीन सुरक्षाकर्मी, ९ वटा कुकुरले दिन्छन् चौबिसै घण्टा पहरेदारी
९बुढानिलकण्ठमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै देउवा
१०नबिल बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न
११बाबुराम भट्टराईको यस्तो एक ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला, कसलाई के भने त्यस्तो ?
१२असार ९ गतेदेखि दुबई-काठमाडौँ उडान सुरु हुँदै, कति छ टिकट मूल्य ?
इरानले ट्रम्पलाई पागलको संज्ञा दिंदै अमेरिकी सेनामाथि नै गर्यो अहिलेसम्मकै ठुलो घोषणा, विश्व नै त्रसित
काठमाडौँ । अमेरिकी आ’क्र’मणमा मा’रिएका इरानी राष्ट्रपतिभन्दा लोकप्रिय कमाण्डर कासिम सुलेमानीको अन्त्येष्टिमा विशाल ज’न’प्रदर्शन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहारकका अनुसार दशौं हजार मानिस उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन बिशाल शोकसभामा सहभागी भए । सोलेमानीको अन्त्येष्टिको क्रममा इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्याह अली खमेनीले आँशु नै झारे । तेहरानस्थित सोलेमानीको अन्त्येष्टिको दोस्रो दिन तेहरानमा भेला भएका दशौं हजार मानिसको बीचमा खमेनी रोएका हुन् । यस्तै सोलेमानीकी छोरी जेइनपले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा आ’क्र’मण गर्ने भन्दै चेतावनी दिएकी छन् । ‘मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सिपाहीका परिवार आफ्ना सन्तानको मृ’त्युको पर्खाईमा समय बिताइरहनेछन्’ जेइनपले भनिन् । शोकसभाकै क्रममा उनले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी फौजलाई आ’क्र’मण गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।
त्यस्तै अमेरिकाका लागि ‘अँध्यारो दिन’को चेतावनी उनले दिइन् । सम्बोधनको क्रममा उनले भनेकी छन्, ‘पागल ट्रम्प, मेरो बुवाको शहादत्सँगै सबै समाप्त भयो भनेर नसोच !’ इरानी कमाण्डर सोलेमानी गत शुक्रबार इराकको बगदादमा अमेरिकी हवाइ हमलामा मारिएका थिए । यससँगै इरान र अमेरिकाबीच तनाव चर्किँदै गएको छ । इरानले २०१५ को आणविक सम्झौताबाट पछि हटेको भन्दै अमेरिकासँग बदला लिने चेतावनी दिँदैआएको छ । अमेरिकाले पनि इरानले आक्रमण गरेको खण्डमा आफूले जवाफ दिने भन्दै ५२ स्थानलाई निशाना बनाएको बताएको छ ।
अमेरिकाको ड्रोन आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका जनरल कारिम सुलेमानीको श’व उनको जन्मस्थान तेहरान पुर्‍याइएको छ । उक्त आक्रमणमा इराकी सेनाका कमान्डर तथा प्रमुख कतइब हिजबुल्ला, अबु महदी अल–मुहान्दिसलगायत पाँचजनाको ज्यान गएको छ । इरानी जनरलको श’व इरान उडाउनुअघि बगदादमा हज्जारौं मानिसहरु उनको शोक सभामा उपस्थित भए । सुलेमानीको श’व तेहरानमा पुर्‍याउनुअघि उनलाई सोमबार तेहरान युनिभर्सिटीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइनेछ भने मंगलबार उनको जन्मस्थान केरमान पुर्‍याउनुअघि मासुमेह श्राइनमा पनि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने बताइएको छ । सुलेमानीको श’वलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन मानवसागर उर्लिएको देख्न सकिन्छ
यस्तै इराकको संसदले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै मुलुकबाट सबै विदेशी सेनाहरुलाई हटाउन आदेश दिएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इराकलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘इराकमा हाम्रो असाध्यै महँगो हवाई अड्डा छ । यो निर्माणमा अर्बौं डलर खर्च भयो । हामीले यसको पैसा नपाएसम्म त्यो ठाउँ छोड्ने छैनौं,’ उनले पत्रकारलाई भने । इराकले अमेरिकी सैनिकलाई जबर्जस्ती बाहिर निकाल्न खोजे इरानले कहिल्यै नदेखेको प्रतिबन्ध खेप्न बाध्य हुने ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् । इराकमा पाँच हजार अमेरिकी सैनिक छन् ।
इराकी संसदको एउटा असाधारण संसदीय सभाले सरकारलाई बगदादसँग मिलेर इस्लामिक स्टेट अफ इराक र लाभान्ट – आइएसआइएलसँग लड्नका लागि अमेरिका तथा उनका सहयोगी राष्ट्रहरुसँग मागिएको सैन्य सहयोग र’द्द गर्न आदेश दिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘सरकारले इराकमा इस्लामिक स्टेटसँग लड्नका लागि चालिएको सैन्य अभियानको अन्त्य र विजय प्राप्तिको कारण विदेशी गठबन्धनसँग मागिएको सैन्य सहयोग रद्द भएको घोषणा गर्दछ ।’ अमेरिकाले इरानी जनरल कासिम सुलेमानीलाई गत हप्ता बगदादमा ह’त्या गरेपछि शीतयुद्ध उच्चतम बिन्दुमा छ । इरानले ‘खतरनाक बदला’ लिने कसम नै खाएको छ । ६२ वर्षे सुलेमानीलाई अमेरिकाले आतंककारी घोषणा गरेको थियो ।
त्यस्तै इरानका कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीको ह’त्या’पछि इरान र अमेरिका एक अर्काविरुद्ध खनिएका छन् । आइतबार राष्ट्रपतिले इरानलाई विल्कुल नयाँ हतियारले हमला गर्ने धम्की दिएको २४ घण्टा नबित्दै इरानले भने ट्रम्पको टाउकोको मूल्य तोकेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित खबरका अनुसार त्यसको केही बेरपछि इरानले ट्रम्पको टाउकोको मूल्य तोकेको छ । यसका लागि ८० मिलियन डलर (लगभग ९ अर्ब रुपैयाँ) तोकिएको हो ।
जनरल सुलेमानीको अन्तिम संस्कारको क्रममा एक संस्थाले इरानका सबै नागरिकलाई एक डलर दान गर्न अपिल गरेको छ । ट्रम्पको टाउकोको बदलामा राखिएको ८० मिलियन डलर जम्मा गर्नका लागि संस्थाले सबै इरानी नागरिकलाई दान गर्न अपिल गरेको छ । मसादमा जतिबेला सुलेमानीको शोक सभा आयोजना गरिएका बेला इरानी संस्थाले यो घोषणा गरेको हो ।
इरानले सन् २०१५ आणविक सम्झौता अन्तर्गतका कुनै पनि प्रतिबन्धलाई पालना नगर्ने घोषणा गरेको छ । एक वक्तव्य जारी गरेर इरानले अब उसले परमाणु प्रशोधनको क्षमता, स्तर, भण्डारणका साथ-साथै अनुसन्धान तथा विकासमा कुनै पनि प्रतिबन्ध पालना नगर्ने बताएका छन् । इरानको घोषणा तेहरानमा बसेको इरानी मन्त्रिमण्डलको वैठकपछि आएको हो । केही दिन अघि बग्दादमा एक अमेरिकी हवाई आ’क्रम’णमा इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मा’रि’एपछि दुई देशबीच तनाव बढेको स्थितिमा इरानको निर्णय आएको हो ।
उता सुलेमानी मारिएको इराकमा पनि स्थिति तनावपूर्ण छ । समाचार अनुसार आइतबार साँझ बंग्दादस्थित अमेरिकी दुतावासमा मिसाइल हानिएको थियो । आ’क्र’मणबाट कुनै हताहतीको खबर भने आएको छैन । आइतबार सुलेमानीको श’वलाई इरान लगियो । सुलेमानीको श’व इरान पुग्दा लाखौं इरानी नागरिकले उनलाई नायकको पार्थिक शरिर घर ल्याएको जस्तो सम्मान दिए । उता इराकी संसदले आइतबार नै इराकबाट बसिरहेका विदेशी सुरक्षाबलले देश छाड्नुपर्ने एक गैर–बाध्यकारी प्रस्ताव पास गर्यो ।
बग्दाद विमानस्थलमा भएको सुलेमानीको ह’त्याको विरोधमा यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । इस्लामिक स्टेट समूहवि’रु’द्ध बनेको अन्तराष्ट्रिय गठबन्धन अन्तर्गत इराकमा ५ हजार अमेरिकी सैनिक छन् । आइतबारको मतदान अघि गठबन्धनले आईएसविरोधी अभियानलाई केही समय विराम लगाएको थियो । सन् २०१५ को सम्झौता अनुरुप, इरान आफ्नो संवेदनशील परमाणु गतिविधिहरुलाई सिमित गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय निरिक्षकलाई निगरानी गर्न दिन अनुमती दिएको थियो । बदलामा इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाइने प्रतिबद्धता थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८मा सम्झौताबाट एकतर्फी रुपमा हात झिके । ट्रम्पले आफू इरानसँग नयाँ सम्झौता गर्न चाहेको बताएका थिए । ट्रम्पले नयाँ सम्झौतामा इरानको परमाणु र ब्यालेस्टिक मिसाइलमा अनिश्चितकालिन रोक लगाउने बुदा थपिनुपर्ने बताएका थिए । इरानले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि इरानले विस्तारै सम्झौता अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने वाचा परित्याग गर्दै गएको थियो । सुलेमानीको मृ’त्युको समाचार आउनु अघि नै इरानले सम्झौताबारेमा नयाँ घोषणा गर्ने बताएको थियो ।
आइतबार इरानी मिडियाले तिनको देशले सन् २०१५ को सम्झौताले अघि ल्याएको कुनै पनि प्रतिबन्ध नमान्ने घोषणा सार्वजनिक ग¥यो । ‘इरानले आफ्नो आणविक प्रशोधनलाई बिना रोकतोक र आफ्नो प्राविधिक आवश्यकता अनुरुप अघि बढाउनेछ ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । तथापि, वक्तव्यले इरान सम्झौताबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिएको भनेको छैन । वक्तव्यमा इरानले संयुक्त राष्ट्र संघीय निगारनीकर्ता आइएईएसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने बताएको छ । ‘इरान आफ्नो प्रतिबद्धतामा फर्किन तयार छ तर त्यसको लागि हामीले त्यस सम्झौता पालना गरेबापतको फाइदा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । ’ वक्तव्यमा भनिएको ।
इरानले उसको आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनको लागि हो भन्दै आएको छ । तर पश्चिमी देशमा इरानले गोप्य रुपमा ब’म विकास गर्ला भन्ने शंकामाझ सन् २०१०मा संयुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, अमेरिका र युरोपले उमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाए । २०१५ आणविक सम्झौता इरानको आणविक कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा सिमित गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको थियो । यो सम्झौता पालन गरे बापत इरानले प्रतिबन्धमा सहुलियत पाउने कुरा उल्लेख छ । सन् २०१५जुलाई अघि इरानले ठूलो मात्रामा प्रशोधित युरेनियम जम्मा गरेको थियो ।
उक्त परिणामबाट आठदेखि १० वटा ब’म बन्ने तत्कालिन समयमा ह्वाइट हाउसले बताएको थियो । तत्कालिन समयमा अमेरिकी विज्ञले बताए अनुसार यदी इरानले ब’म बनाउने काममा तिव्रताका साथ लाग्यो भने उसले दुई तीन महिनामा आणविक हतियारको लागि आवश्यक ९० प्रतिशत प्रशोधित युरेनियम बनाउने बताएका थिए । उक्त अवधिलाई ‘ब्रेक आउट टाइम’ भनिन्छ । अहिलेको समयमा इरानले आणविक हतियार बनाउने प्रयास ग¥यो भने ‘ब्रेक टाइम’ पार गर्न एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर यदी प्रशोधनको मात्रा २०प्रतिशत वृद्धि गरियो भने त्यो समय घटाएर ६ महिना बनाउन सकिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निजी गाडी चलाउन दिने तयारी, सिडिओको बैठक बस्दै
महाकाली नदीमा बाढी- निर्माणाधीन पुलको बाँध बगायो
प्रेमिकासँग ​पुनर्मिलनपछि दंग ज्याकले किन गर्न सकेनन् गोल ?